आइतबार १०, असोज २०७८ १४:५१
एनआरएनएको युरोप संयोजकमा शुक्रराज न्यौपानेको उम्मेदवारी
लण्डन – गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आइसीसी तर्फ युरोप संयोजकमा वर्तमान उपसंयोजक शुक्रराज न्यौपानेले उम्मेदवारी दिने भएका छन् । गणतन्त्र आयरल्याण्डको डब्लिनमा बसोवास गर्दै आएका न्यौपाने हाल युरोपको उपसंयोजक (डीआरसी) हुन् ।
दारी ग्याङ सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक बोहराद्धारा दृस्टी फाउन्डेसनलाई सहयोग
समाजसेवी पदम भुलको ‘महामारी दशा’ सार्वजनिक (भिडियो सहित )
समाजसेवी पदम भुलको ‘महामारी दशा’ बोलको देउडा गित सार्वजनिक भएको छ । चर्चित गायिका टिका पुन र सुरजमान जैगडीले स्वरवद्ध गरेको गित आइतबार गायिका पुनकै यूट्व च्यानलबाट सार्वजनिक भएको हो ।
एमाले नेता भीम रावलले सांसद पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन् । संसद भवन बानेश्वरमा पुगेर सञ्चारकर्मी समक्ष उनले राजीनामा पत्र पढेर सुनाएका थिए ।
विश्वासको मत पाए अर्को बजेट, नपाए यही
सरकार परिवर्तन नभएको भए अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बिहीबार आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा व्यस्त हुन्थे । यो दिन उनीहरू व्यस्त त भए तर बजेट कार्यान्वयनबारेको छलफलमा होइन । सरकार परिवर्तन भई नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आएपछि अर्थ मन्त्रालयमा विषयगत ‘ब्रिफिङ’ र विभिन्न संघसंस्थाका अधिकारी भेट्न आउनेक्रम चलिरहेको छ ।
आज पश्चिमी क्षेत्रका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने मौसमविद्ले बताएका छन् । लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरले बताउनुभयो ।
आजबाट साउन महिना सुरु भएको छ । साउनको सुरुवातसंगै अहिले अधिकाशं महिलाका हातमा मेहन्दी र रंगीबिरंगी चुराले सजिएको देख्न सकिन्छ । त्यसमाथि नेपाली हिन्दु नारीहरुकालागि साउन विशेष महत्वको महिना भएकाले पनि यो महिना सुरु हुन नपाउंदै महिलाहरु रंगीन हुन थालेका हुन् । अहिले स–साना बालिका, युवती, अधबैंसे नारी हुन् या बृद्ध महिला, यतिबेला सबैको नाडीमा काँचका हरिया चुरा सजिएको देख्न पाइन्छ । साउन लागे लगत्तै हिन्दु महिलामा छुट्टै उत्साह र उमंग छाएको छ । रातो, पहेंलो र हरियो चुरापोते तथा कपडामा सजिएका महिलाको मन्दिर र बाटोघाटोमा चहल–पहल देखिन्छ । पछिल्ला वर्षमा साना बालिका र किशोरीमा समेत मेहेन्दी र हरियो चुरा लगाउने ’क्रेज’ बढ्दो छ । धेरैले यसलाई फेसनका रुपमा लगाएका छन् भने कतिले धार्मिक महत्व बुझेर विश्वासमा यसो गरेका छन् ।
बालबालिकामा इन्टरनेटको लत
अचेलका आमाबुबाले ‘मेरा नानी बाबु त मोबाइल नभई भातै खाँदैनन्’ भन्दै गर्व गर्छन् । आमाबुबाले छोराछोरीलाई मोबाइलमा भिडियो देखाएर खाना ख्वाउन थालेपछि बिस्तारै उनीहरूको यसैमा बानी बस्छ । ठूलो भइसक्दा पनि छोराछोरी मोबाइल नहेरी खानै नखाने भएपछि बल्ल यस्तो बानी समस्या भइरहेको छ भन्ने थाहा पाइन्छ ।
सुदूरपश्‍चिमदेखि सात समुन्द्र पारीसम्मकाले पत्याएका देउवा
२००३ मा असिग्राम रुवाखोला हाल गन्यापधुरा गाउँपालिका-एक डडेलधुरामा जन्मेका शेरबहादुर देउवा २०२० मा विद्यार्थीकालमै कांग्रेसको राजनीतिमा होमिए । अनि उनी निरन्तर राजनीतिमै क्रियाशील छन् । अर्थात्, देउवा १९ वर्षदेखि कांग्रेसको राजनीतिमा ‘पूर्णकालीन’ रूपमै छन् । २०४८ को चुनावमा सुदुरपश्‍चिमलाई ‘कांग्रेसको गढ’ बनाएपछि एकैचोटि उनको उचाइ बढ्यो । त्यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एक सिटबाहेक पूरैमा जन्मथलो सुदूरपश्‍चिममा कांग्रेसले पकड जमाउन देउवाको नाम काफी रह्यो ।
को हुन् ? पाचौ पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा (जीवनी)
शेरबहादुर देउवा वि.स‌. २००३ जेठ महिनामा डडेलधुरा जिल्लाको असीग्राम गाविस वडा नम्बर ५ मा जन्मिनु भएको हो। उहाँले प्राथमिक शिक्षा डडेलधुराकै असीग्राम प्राथमिक विद्यालय र निम्न माध्यमिक शिक्षा महेन्द्र मावि तथा माध्यमिक शिक्षा सीताराम मावि उच्चकोट डोटीबाट लिनु भएको थियो। उहाँ स्कुले जीवनबाट नै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिलाई आफ्नो आदर्श बनाउन थालिसक्‍नु भएको थियो।
नेपाली काँग्रेसले ५ वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको हो । तर, परिस्थितिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो । अब, देउवाको चुनौती ठुलो छ ।
शीतल निवासले देउवालाई पठायो नियुक्त पत्र
शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा उल्लेख नगरिकनै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी छन् ।
अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले गोल्डेन बल जितेका छन् । प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी हुँदै मेस्सीले गोल्डेन बल जितेका हुन् ।
एमालेमा सहमतिको खाका कोरिएको कार्यदलका नेताहरुको दावी, शिर्ष तहमा सहमित भएपछि आज सार्वजनिक गरिने
नेकपा एमालेको कार्यदलले पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्दै सहमतिको खाका कोरेको दावी गरिएको छ ।
गाउँ फर्केर खेतिपाती गर्ने ज्वाला संग्रौलाको बयान
केही समयदेखि सामाजिक सञ्जालमा उग्र टिप्पणी लेख्दै चर्चा बटुलेकी कथित “सामाजिक सुधारक” ज्वाला संग्रौलाद्वारा सन्चालित फरकफरक नामका २० वटै अकाउन्ट तीन सातादेखि निष्क्रिय छन् । आफ्नै साथी युवा संघ आबद्ध खुश्बु घिमिरेलाई सामूहिक कुटाई र अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा असार ६ गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेकी उनीमाथि तीन वटा मुद्दा अघि बढाउन प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय,काठमाण्डौबाट अनुमति लिएको छ । प्रहरीका अनुसार संग्रौला हिरासतमा पर्नुअघि नै एक जना ट्राफिक प्रहरी असईमाथि रंगभेदी र जातीय विभेदरुपी अभिव्यक्ति दिएको भिडियो भाइरल बनेको थियो । त्यसलगत्तै अनुसन्धानको क्रममा संग्रौलाको जन्मदर्ता र विवाह दर्तासमेत नक्कली प्रमाणित भएपछि यसअघि अभद्र व्यवहारको मुद्दासहित जातीय विभेद र लिखित र्कितेसम्बन्धी तीन वटा मुद्दा अघि बढाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
भेरोसेल खोप लिन वायु सेवा निगमको जहाज आज चीन जाँदै
कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोप ल्याउनको लागि नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज आज चीन जाँदैछ ।
एमाले कार्यदल बैठक ७ बजेसम्मका लागि स्थगित, के होला त आजै सहमति ?
नेकपा (एमाले) को विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको बैठक साँझ ७ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि खारेज गर्न संयुक्त विद्यार्थीको माग
राष्ट्रियसभाको एक समितिले तत्त्कालीन राजदरबारमा रहेको लाल बाकस फेला नपारेको जनाएको छ । ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज सुरक्षित राखिएको लाल बकस अहिलेसम्म गायव छ ।